सेक्सले रोगबाट बचाउने मात्र होइन आत्मसम्मान पनि बढाउँछ : विज्ञ (सेक्सका ९ फाइदासहित) – Mission
सेक्सले रोगबाट बचाउने मात्र होइन आत्मसम्मान पनि बढाउँछ : विज्ञ (सेक्सका ९ फाइदासहित)
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, फाल्गुन १८, २०७२
एजेन्सी – सेक्स जीवनको ठूलो आनन्द हो । मानव जीवनको अस्थित्वका लागि पनि यसको अपरिहार्य छ । सेक्स माया र सन्तान उत्पादनमा मात्र सिमित छैन । विज्ञहरुका अनुसार सेक्सले मानिसको स्वास्थ्यमा विभिन्न पक्षबाट फाइदा गर्छ । चिसोबाट जोगाउनदेखि ह्दयघातबाट बचाउनसम्म यसले मद्धत गर्छ ।
कम उत्तेजित हुने मानिसको आयुमा समेत असर गर्ने नयाँ तथ्य भेटिएको वैज्ञानिकहरुले दाबी गरेका छन् । कम उत्तेजित हुने पुरुषमा छिट्टै मृत्यु हुने ७० प्रतिशत सम्भावना रहेको उनीहरुको भनाई छ । उत्तेजना कम हुने मानिसहरुमा मुटुजन्य समस्या हुने अमेरिकाको मिसिपीका वैज्ञानिकहरुले बताए । यस्तो समस्याबाट अमेरिकामा झन्डै २ करोड मानिस प्रभावित भएको पनि उनीहरुको भनाई छ । लिंग उत्तेजित नहुने मानिसहरुलाई बारम्बार हृदयघात, उच्च रक्तचाप लगायतको समस्या हुने र त्यसको कारण अल्पायुमा नै मृत्यु हुने गरेको वैज्ञानिकहरुको दाबी गरेका छन् । यसअगाडि विशेषगरी यो समस्याबाट वृद्ध मानिसहरु पीडित हुने बताइन्थ्यो । तापनी ४० वर्ष मुनिका २० प्रतिशत मानिसमा यस्तो समस्या देखिएको वैज्ञानिकहरु बताउछन् ।
मुड फ्रेस बनाउँछ
माया आदानप्रदानको क्षण र चरमोत्कर्षमा पुग्दा उत्पन्न हुने न्युरो केमिकलले खुसी हुने हर्मोन उत्पादन गर्छ । सेक्सको अवधि र त्यसपछि उत्पन्न हुने अक्सवाईटोकिन हर्मोनले मानिसलाई आफ्नो जोडिप्रति बढी इमान्दार बन्न, शान्त हुन र निन्द्रा लगाउन सहयोग गर्छ । एक आपसमा माया साटासाट गरेको २० मिनेटपछि अक्सवाईटोकिन हर्मन निस्कन्छ । पुरुषको तुलनमा यस्तो हर्मोन महिलामा चार गुणा बढी निस्कन्छ । त्यस्तै, सेक्सपछि सेरोटोनिन नामक अर्को हर्मोन पनि उत्पादन हुन्छ । यस हर्मनले मानिसलाई बढी खुसी र हँसिलो बनाउछ ।
बेलफास्टको क्विन्स युनिभर्सिटीले गरेको एक अध्ययन अनुसार सातामा तीन पटक यौन सम्पर्क गर्नेलाई मुुटुसँग सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सम्भावना न्यून हुन्छ । व्रिटिश हर्ट फाउन्डेसनका मेडिकल डाइरेक्टर पिटर वीइसवर्गका अनुसार ४० र ५० को दशकमा नियमित सेक्स गर्नेमा ह्दयघातको खतरा अत्यन्तै कम हुन्छ । ‘जहाँसम्म मुटुको सवाल छ, सेक्स अर्को प्रकारको व्यायाम पनि हो,’ गायज एन्ड सेन्ट थोमस हस्पिटल र सेक्सुअल डाइजफङसन एशोशियसनका अध्यक्ष डा. ग्राहम ज्याक्सन भन्छन्, ‘फिटनेसको सन्र्दभमा भन्ने हो भने एक पटक सेक्स गर्नु भनेको एक माईल टाढा हिड्नु जस्तै हो ।’ यति तपाई यति काम गर्न सक्नुहुन्छ भने सेक्स गर्दा कुनै खतरा देखिदैन,’ उनी थप्छन् । न्यू इन्ल्यान्ड इन्स्टिच्युटका बैज्ञानिकहरूले गरेको अध्ययनअनुसार मुटु मजवुत बनाउन यौनसम्पर्कको महत्पूर्ण भूमीका रहन्छ । तर यौनसम्पर्क स्वस्थ र सुरक्षित हुनुपर्छ ।
यौनसम्पर्क नराख्ने व्यक्तिमा मुटु रोगको संभावना, सातामा दुईपटक भन्दा बढी यौनसम्पर्क राख्नेमा भन्दा ५५ प्रतिशत बढी हुन्छ । ४० देखि ७० वर्षसम्मका १ हजार पुरूषमा १६ वर्षसम्म गरिएको अध्ययन पछि वैज्ञानिकहरूले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् । यदि यौन आवश्यकता समयमै पूरा भएमा शारीरिक रूपमा समेत मानिस स्वस्थ रहने समेत अनुसन्धानले देखाएको छ । आफ्नो मायालुसँग विताएको क्षणले पुरूषलाई भावनात्मक रूपमा समेत फाइदा हुनाले चिन्ता, तनाव जस्ता मानसिक रोगबाट मुक्ती मिल्छ । यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध मुटुसँग रहन्छ ।
सेक्सले चिसोबिरुद्ध लड्ने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा बृद्धि गरिदिन्छ । सातामा एक÷दुई पटक नियमित सेक्स गर्दा इम्युनोग्लोबुलिन ए (आइजीए) प्राप्त हुन्छ । जसले चिसोबिरुद्ध लड्न रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई सहयोग गर्छ । सेक्सका क्रममा मुटुको चाल तीब्र हुँदा शरीरका अंग तथा कोषमा ताजा रगत आपूर्ति हुन्छ । त्यतिबेला शरीर पनि फूर्तिलो हुन्छ ।
आयु र सेक्सका बारेमा गरिएका विभिन्न अध्ययनहरु मध्ये वेल्सका मानिसहरुमा गरिएको एउटा अध्ययन निकै महत्वपूर्ण सावित भएको छ । अध्ययन अनुसार महिनामा मुस्किलले एक पटक मात्र सेक्स गर्ने मानिस सातामा दुई पटक सेक्स गर्नेको तुलनामा छिट्टै मृत्यु हुने बढी सम्भावना हुन्छ । ‘यौन गतिविधिको पुरुषको स्वास्थ्यमा रक्षात्मक प्रभाव पर्छ,’ डा. ब्रिउर भन्छिन् ।
ताइवान विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरुले नियमित यौन सम्पर्क गर्नेहरुको आयु बढ्ने पत्ता लगाएका हुन् । तर, महिलाहरुमा भने यो तथ्य लागु नहुने बताइएको छ । डा। हुवाङ कुवाङले हप्तामा कम्तीमा पनि एकपटक सेक्स गर्ने मानिसहरु ८० वर्षभन्दा बढी बाँच्ने सम्भावना ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने तथ्य पत्ता लगाएका हुन् । अनुसन्धानकर्ताका अनुसार सेक्सले हृदयाघातबाट हुने मृत्युमा पनि कमी ल्याउछ भने मधुमेह हुने सम्भावना ४० प्रतिशतले र मुटुको रोग हुने सम्भावना ३० प्रतिशतले कमी ल्याउछ ।
नियमित सेक्स गर्ने मानिसमा बाँझोपनको खतारा पनि कम हुन्छ । ‘नियमित वीर्य फालिरहँदा वीर्यको गतिमा तीब्रता आउछ जसका कारण वीर्य उर्वरताका लागि छिटो भन्दा छिटो अन्डासयसम्म पुग्छ,’ मिडल्यान्ड फर्टिलिटी सर्भिसका मेडिकल निर्देशक डा गिलियान लकउड भन्छिन् । ‘जब उर्वरताको कुरा आउछ, हरेक रात सेक्स गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ डा लकउड थप्छिन् । अनुसन्धानहरूले धेरै स्खलनले जीवनको उत्तरार्धमा प्रोस्टेट क्यान्सर हुने सम्भावना कम भएको देखाएको छ ।
दिमागको कोष बढाउँछ
३५ वर्ष पुगेपछि हरेक दिन हामीले ७ हजार दिमागका कोषहरु गुमाउन थाल्छौं । नियमित रुपमा यौन सम्पर्क गर्नेको दिमागको कोषमा वृद्धि हुने अमेरिकास्थित प्रिन्सटन युनिर्भसिटीका वैज्ञानिकहरु बताउँछन् । प्लस ओनमा सार्वजनिक गरिएको एक अध्ययन अनुसार सेक्सले स्मरण शक्ति रहने दिमागको कोषहरुमा तीब्र बृद्धि गरिदिन्छ ।
तनाब र निराशलले स्मरण शक्ति हुने दिमागको हिपोक्याम्पसको आकारलाई सानो बनाइदिन्छ । तर व्यायाम र सेक्सले यस्तो प्रभावको डटेर लड्छ । यसबाहेक सेक्सले दिमागको कोषलाई पतन हुनबाट बचाउँछ ।तसर्थ बुढेसकालसम्म पनि यौनका दृष्टिले सक्रीय वृद्धबृद्धा डिमेन्सिया रोगको शिकार हुनबाट बच्छन ।
मिठो निद्रा लाग्छ
सेक्स पछि पुरुषमा अक्सिटोसीन हाम्रोनको उत्पादन बढी हुन्छ । यो हम्रोनले आनन्द महशुस गराउँछ र प्रोलेक्टिन हम्रोनले निद्रा ल्याउँछ । खासमा सेक्स र निद्राको गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । निद्राको समस्या भएका पुरुषलाई सेक्स निकै उपयोगी मानिन्छ । कतिपय अवस्थामा तनाव कम गर्न पनि सेक्स गरिन्छ । सेक्स पछि पुरुषमा मानसिक तनाव कम हुन्छ र निद्रा लाग्छ । सेक्समा क्यालोरी पनि बढी खर्च हुन्छ । कतिपय पुरुषहरु थकान महसुस गरेरपनि तुरुन्तै निदाउने गर्छन् ।
सेक्सले व्यक्तिको आत्मसम्मान बढाउन मद्दत गर्छ । युनिभर्सिटी अफ टेक्सासको अध्ययन अनुसार मानिसले सेक्स गर्ने दुई सय ३७ वटा कारणमध्ये आत्मसम्मान पनि एउटा कारण हो । सेक्स र चरमोत्कर्सले माया र सद्भावमा वृद्धि गराउँछ । यसको कारण भनेको सेक्सका बेला उत्पादन हुने ‘अक्सिटोसिन’ नामक हर्मोन हो, जसलाई ‘प्रेम हर्मोन’ पनि भनिन्छ ।
दुखाइ कम गर्न मद्दत
अक्सिटोसिनले शरीरमा इन्डोमोर्फिन नामक हर्मोन निकाल्न मद्दत गर्छ । इन्डोमोर्फिनलाई प्राकृतिक ‘पेन किलर’ पनि भनिन्छ । टाउको दुखाइ, हड्डी दुखाइ कम गर्न पनि यौन सम्पर्कले मद्दत गर्दछ ।
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, फाल्गुन १८, २०७२ 4:48:26 PM |
Prev भावनात्मक पत्र : मायाकी खानी
Nextकरिब २३ सय बालबालिकालाई ददुरा खोप